walnut alaabta guriga
Ku saabsan Qandaraaska iyo Agabka Ganacsiga
Qalabka guryaha ee M&Z waxa ay iskaashi la sameeyeen shirkado badan oo caan ah, iyaga oo siinaya sahayda alaabta guryaha ee muddada-dheer ee hudheelada dhaqaalaha, guryaha, guryaha la dego, mashruuca ganacsiga iwm. gaarsiinta degdega ah, tayada cilad eber, adeeg xirfadeed iwm.
Haddii aad rabto inaad nala shaqeyso, fadlan noogu soo dir emayl shuruud kasta oo laga yaabo inaad qabtoinfo@homemz.com
Waxaan ku jawaabi doonaa 24H gudahood.
Ku saabsan OEM ODM Furniture
Qalabka M&Z waxay khibrad fiican u leeyihiin soo saarista alaabta guryaha OEM OEM, waxayna la shaqaynayeen noocyo badan oo alaab guri ah oo adduunka ah.
Boqolaal farsamayaqaanno sare ah oo ku takhasusay soo saarista alaabta guryaha in ka badan 30 sano ayaa halkan isugu imaanaya.Aad bay u yaqaaniin oo aad ugu xeel dheer yihiin farsamada gacanta ee kala duwan, waxay si fiican u yaqaaniin farsamada ugu horumarsan iyo kuwa cusub, qayb kasta oo ka mid ah kula dhaqmaan heerar sare.Ku lug leh horumarinta alaabta, isku darka bilicda iyo naqshadaynta macquulka ah, waxaanu ku siinaynaa tayo, wax ku ool ah, alaab guri oo qurxoon marka la eego aragtida macaamilka.
Waxaan la shaqeynaa walxo badan oo gaar ahaan alwaax ku saleysan oo ay ku jiraan MDF, MDP, guddiga qayb ka mid ah, looxa plywood, looxa laminate, boardery board iyo alaabta la dhammeeyey oo ay ku jiraan daaha, rinjiga, dharka, marble dhammayn iwm.
Waa maxay sababta loola shaqeeyo M&Z Furniture
1. Isha Dhammaan Alaabta Guryaha ee Mashaariicdaada oo leh Xalka Hal Joogsi ah
Ka ilaali inaad la macaamilato alaab-qeybiyeyaal badan alaabta kala duwan ee mashruucaagu u baahan yahay.
In uu kuu sahlo in aad hesho qiimo ka badan oo la doorbidayo xirmada mashruuca guriga oo dhan.
Ka xoreeya inaad ka walwasho awoodda iyo keenista alaab-qeybiyeyaal kala duwan.
2. Ku Hay Mashruucaaga Waddada Waddada Adeegga Mashruuca oo dhan
Cabbirka & Kaalmada Rakibaadda
Kooxdayada mashruuca ayaa diyaar u ah inay soo booqdaan goobtaada dhismaha si loo cabbiro iyo rakibo.M&Z weligood ha oggolaan wax cabbir khaldan iyo rakibid aan habboonayn inay saamayso mashaariicdaada.
Soo bandhigida 3D iyo jeesjeeska
Iyadoo sawirada 2D ay yihiin shuruudo aasaasi ah oo loogu talagalay naqshadeynta gudaha, M&Z waxay bixisaa bandhigyo 3D ah iyo adeegga majaajillada ee dalabaadka mashruuca.Tani waa in laga fogaado isfaham la'aanta iyo khaladaadka sawirada 2D.
Booqashooyinka Goobta Shaqada & Taageerada iibka ka dib ee Maxaliga
Kooxdayada iibka ayaa si joogto ah u qaada safaro ganacsi si ay u booqdaan goobaha shaqada oo ay bixiyaan taageero iibka ka dib oo ay la socdaan bandhigyada maxaliga ah.M&Z waxay kugu xaqiijinaysaa adeeg joogto ah oo xirfad leh kahor iyo kadib dalabka.
3. Warshada Furniture-ka weyn oo leh wax-qabad aad u sarreeya
Xakamaynta Cimilada & Deegaanka Boodhka Ka Xorta ah
Qorshaynta aqoon-is-weydaarsigu waxay ku salaysan tahay iftiinka qorraxda iyo jihada dabaysha, dhammaan warshadda waxay si buuxda u isticmaali kartaa tamarta qorraxda.M&Z Furniture waxay qaateen wareegga biyaha dhulka hoostiisa si ay u dhawraan heerkulka iyo qoyaanka qaraabo, waxayna ilaaliyeen bay'ad ka caagan boodhka hababka ururinta siigada kuwaas oo si joogto ah hawada uga soo saara miirayaasha dibna dib ugu warshadeeya hawo nadiif ah.M&Z Furniture waxa ay qaateen agab deegaan-u-saaxiibtinimo si ay u dhisaan aqoon-is-weydaarsiyo waxayna soo bandhigtay qalabka lagu daweeyo gaaska qashinka iyo qalabka nadiifinta iftiinka UV, kuwaas oo ka dhigaya M&Z Furniture mid ka mid ah soosaarayaasha alaabta guryaha ee leh qiiqa ugu hooseeya ee Shiinaha.
Kooxaha Qalabka Habka Heerka Sare
M & Z Furniture nambarada Jarmalka Homag toos ah oo toosan oo toosan khadadka wax soo saarka, afar-dhamaadka si toos ah khadadka wax soo saarka, 11 + 12 Homag khadadka wax soo saarka, CNC xarumaha machining multifunctional iyo Cefla si toos ah khadadka rinjiyeynta si toos ah, gaarey heer sare ah automation iyo sirdoonka , dammaanad qaadida tayada hogaaminta iyo keenista degdega ah.
Ku Bilow Walxaha Nadiifinta Deegaanka
Looxyadu waxay u hoggaansamaan heerarka adag ee ka sarreeya E1.Silestone, caesarstone iyo dhagxaanta quartz ee kale ee la soo dhoofiyo dhamaantood waxaa cadeyay shaybaadhka CANS.Iyada oo ay hagayso maaraynta tayada Toyota, nidaamka jaangooyada ISO, waxaanu si adag u dhaqan galinaa halbeegyada alaabta guriga oo ka sareeya heerarka qaranka ee ka soo saarida, wax soo saarka, tijaabinta, dhoofinta.
Toyota Tayada & Maamulka Wax soo saarka
M&Z Furniture waxay u hoggaansamaan tayada Toyota & maaraynta wax soo saarka, ku dheggan isla-waqtiga, cilad- eber, wax-soo-saarka qiimaha lagu daray, 100% kontoroolka tayada, iyo adeegga aasaasiga ah ee macaamiisha.
4. Sumcada Wacan ee Warshadaha Alaabaha ee Shiinaha
Hormoodka Warshadaha Furniture ee Shiinaha
M&Z Furniture waxa ay noqotay xubintii ugu horaysay ee Guddiga Farsamada Halbeega Halbeega Alaabaha Qaranka ilaa 2009, waxa ayna si firfircoon uga qayb qaadanaysay samaynta heerar kala duwan, waxa ayna gacan ka geysatay kor u qaadida halbeega warshadaha.M&Z Furniture waxay iska leeyihiin Shaybaarada ka gudbay shahaadada CNAS ee qaranka oo sameeyay 100% tijaabinta tayada alaabta ceeriin iyo alaabada dhammaatay.
Maamuusyada & Shahaadooyinka
Ilaalinta Deegaanka Shiinaha
Shahaadada Shaybaadhka CNAS